Walaloon 'sanyumma' Ostiriyaatti dheekkamsa kaase - BBC News Afaan Oromoo
Walaloon 'sanyumma' Ostiriyaatti dheekkamsa kaase
Chaansileeriin Ostiriyaa Seebaastiyaan Kuurz walalichi 'safuu cabseera''
Walaloon waa'ee godaantotaa Ostiriyaatti mata duree The City Rat (Hantuuta Magaalaa) jedhuun barreefame ilmoo namaafi hantuuta dorgomsuusaan ceephaa'ame.
Kantiibaa itti aanaa Braunau am Inn fi michuu paartii biyya bulchaa jiruu Freedom Party (FPO) Kiriistiyaan Ischiilcheertu walaloo kana barreesse, godaantotaan ''madaqaa yookiin amma kana gadhiisaa'' jedhan.
Chaansileeriin Ostiriyaa Seebaastiyaan Kuurz paartiin michuu walaloo 'safuu cabsurraa' akka of fageessu gaafatan.
Walalichi gaazexaa paartiichaa Braunau am Inn, bakka dhalootaa hogganaa Naazii Jarmanii Adoolf Hiitlaritti maxxanfame.
Kuurz walalichi ''jibbisiisaa, kabaja namaa kan xiqqeessuufi sanyummaa akka malee kan agarsiisuu dha'' Ostiriyaan waan akkasiif iddoo hin qbadu jedhaniiru.
Ostriyaan hogganaashee umuriin xinnaa filachuufi
Tartiiba magaalota addunyaa jireenyaaf mijatan
''Hantuuti biroo akkuma nuti asitti jiraannu jiraachuu qabu, jedha walalichi, ''akkaataa jiruufi jireenya akka keenyaa qooddadhaa yookiin dafaa bahaa'' yoo aadaa biraa maktan, akka keenya balleessitanitti lakkaa'ama jedha.
Kantiibaa itti aanaaan Braunau am Inn Ischiilchar eenyuniyyuu ''arrabsuu yookiin miidhuu'' barbaadee hin turre jedhan.
Dhimma seenaadhaan hantuutaafi ilmoo namaa wal-dorgomsiisuu dagachuu isaaniif dhiifama gaaftan. Walalichi jijjiirama ''anaafi warrai biroo'' hantuuta akka bir-qabaatti fayyadamuun ceephaanuu dha. jedhan.
Hogganaan paartii Social Democratic Party (SPÖ) Paamelaa Reendii-Waagnar, wal-bira qabaan namaafi hantuutaa akkasii yeroo olola Naazii baramaa ture jedhan.
Sebaastiyaan Kurz: Cichaan Ostriyaa hogganaa biyyaa umuriin xinnaa addunyaarraa ta'uuf adeema
UKn deeggarsa waraanaa dabalataa £1bn ta'u Yukireeniif kennuuf